10 -ka ugu sarreeya Deeqaha waxbarasho ee New York ee Ardayda Caalamiga ah
Inta badan, ardayda ajnabiga ah ee raba inay wax ku bartaan Mareykanka waxay raadsadaan deeq waxbarasho si ay u maalgeliyaan waxbarashadooda. Si kastaba ha noqotee, ku guuleysiga mid kasta oo ka mid ah deeqaha waxbarasho si aad wax uga barato iskuulada ku yaal Mareykanka si fudud kuma imaaneyso gaar ahaan New York. Sidaa darteed, maqaalkani wuxuu bixiyaa faahfaahinta deeqaha waxbarasho ee ugu sarreeya New York ee ardayda caalamiga ah.
Wax ku barashada kulliyad kasta ama jaamacad ku taal New York ma aha mid raqiis ah. Ardayda caalamiga ah ayaa si aad ah u saameeya aaggan maadaama hay'adaha ku yaal Mareykanka ay ka qaadaan khidmadaha waxbaridda ee ku saleysan dhalashada. Marka, si loo xaliyo dhibaatadan, ardayda ajnabiga ah waxay raadsadaan deeqo waxbarasho si ay u kafaala qaadaan waxbarashadooda.
Waxaa jira deeqo waxbarasho oo badan New York oo loogu talagalay ardayda caalamiga ah inay ku sii wataan shahaadooyinkooda kulliyadaha iyo jaamacadaha. Marka, haddii aad tahay arday caalami ah oo raba inuu wax ku barto New York deeq waxbarasho, markaa maqaalkan adiga ayaa iska leh.
Deeqaha Sare ee New York Ardayda Caalamiga ah
Ardayda caalamiga ah ee aan haysan dhaqaale oo eegaya inay ku sii wataan darajooyinkooda machadyada ku yaal New York ayaa sidaas samayn kara iyagoo galaya mid ka mid ah deeqaha waxbarasho ee ku jira qaybtan.
Sidaa darteed, deeqaha waxbarasho ee ugu wanaagsan New York ee ardayda caalamiga ah waa sida soo socota:
Barnaamijka Sharafta Caalamiga ah ee Kulliyadda Berkeley
Barnaamijka Deeqda Ardayda Caalamiga ah ee Bard College
Ahmet Ertegun Scholarship Scholarship
Kulliyadda Saint Rose Graduate Scholarship
Abaalmarinta Balanqaadka Fredonia
Deeqda Barnaamijka Sharafta
Abaalmarinta Aqoonyahan Dean
Abaalmarinta Madaxweynaha ee Heerka Sare
Ilaaliyaha Deeqda Riyada
Barnaamijka Aqoonyahannada Caalamiga ah ee Hauser
1. Barkeley College Program Honors International
Sannad kasta, Kulliyadda Berkeley waxay siisaa maalgelin sharaf caalami ah ardayda heerka sare ah ee la dhigo machadka. Deeqdan waxbarasho ayaa u saamaxaysa ardayda caalamiga ah inay ku sii wataan barnaamijka shahaadada koowaad ee jaamacadda Berkeley College.
Codsadayaashu waa inaysan noqon muwaadiniin Mareykan ah.
Musharrixiinta waa inay noqdaan arday markii ugu horreysay.
Codsadayaashu waxay ka qalin jabin doonaan dugsi sare oo la aqoonsan yahay waxayna gudbaan imtixaanka gelitaanka ama lahaadaan buundooyinka SAT/ACT ee loo baahan yahay.
Musharixiinta waa inay iska diiwaangeliyaan waqti-buuxa barnaamijka iskaashiga ama barnaamijka shahaadada koowaad ee Berkeley.
Dhinaca kale, codsadayaashu waa inay muujiyaan aqoonta ay u leeyihiin luqadda Ingiriisiga (IELTS, TOEFL, ama barnaamijka ESL ee la ansixiyay). Codsadayaashu waxay sidoo kale soo gudbin doonaan qoraallada rasmiga ah ee dugsiga sare ama dugsiga sare kadib, caddeynta maaliyadda, iyo sawir baasaboor.
Iyada oo ah mid ka mid ah deeqaha waxbarasho ee New York ee ardayda caalamiga ah, barnaamijka maamuusku wuxuu dabooli doonaa kala badh khidmadaha waxbaridda ee qaataha.
Website-ka deeq waxbarasho
2. Barnaamijka Deeqda Ardayda Caalamiga ah ee Kulliyadda Bard
Kulliyadda Bard waxay siisaa deeq waxbarasho ku saleysan baahida ardayda caalamiga ah ee ka diiwaangashan machadka. Abaalmarinta maaliyadeed waxaa la siiyaa ardayda ajnabiga ah ee u qalma si ay ugu sii wataan shahaadada koowaad ee jaamacadda ee Bard College.
Ardayda caalamiga ah ee raba inay ku guuleystaan ​​deeqda waxbarasho waa inay muujiyaan baahida dhaqaale iyagoo dhammaystiraya Codsiga Ardayga Caalamiga ah ee Gargaarka Maaliyadeed. Tirada kaalmada maaliyadeed waa xadidan tahay. Intaa waxaa dheer, deeqda waxbarasho waxay dabooshaa waxbarashada, hoyga, iyo duulimaadka.
Musharrixiinta waa inay haystaan ​​diblooma dugsiga sare ama u dhigma
Codsadayaashu waa inay muujiyaan aqoonta Ingiriisiga.
3. Deeqda Xusuusta Ahmet Ertegun
Sanduuqa Waxbarashada Ahmet Ertegun wuxuu bixiyaa deeqo waxbarasho sannad kasta si loogu xusuusto Ahmet Ertegun oo ah aasaasaha aasaaska Diiwaanka Atlantic. Riwaayad dib -u -midoobid Led Zeppelin oo lagu xasuusto Ahmet Ertegun ayaa horseeday aasaasidda deeqdan waxbarasho.
Abaalmarinta waxaa heli kara fannaaniin karti leh oo ka socda Turkiga si ay ugu sii wataan waxbarashada heerka koowaad iyo qalinjabinta Dugsiga Juilliard ee Magaalada New York.
Laga soo bilaabo 2008, aasaaska wuxuu bixiyay deeqo waxbarasho oo qiimahoodu ka badan yahay $ 110,000 illaa lix muusik oo Juilliard ah si ay awood ugu yeeshaan inay ku sii wataan waxbarashadooda muusikada lacag la’aan.
4. Kuliyada Saint Rose Graduate Scholarship
Sannad kasta, Kulliyadda Saint Rose waxay siisaa tiro deeqo waxbarasho ah ardayda caalamiga ah ee aadka u fiican si ay ugu sii wataan shahaadada masterka ee dhinacyada kala duwan ee waxbarashada. Abaalmarinta maaliyadeed waxay daboolaysaa qayb ahaan waxbarashada muddada barnaamijka shahaadada mastarka.
Qaatayaasha abaalmarinta waxay heli doonaan $ 2,000 sanadkii sanadkii ugu badnaan laba sano. Tirada deeqda waxbarasho waa toban waana mid ka mid ah deeqaha waxbarasho ee ugu wanaagsan New York ee ardayda caalamiga ah.
Codsadayaashu waa inay heleen oggolaansho shuruud la'aan ah si ay u sii wataan daraasadaha qalin -jabinta ee Kulliyadda Saint Rose.
Musharrixiinta waa inay iska diiwaangeliyaan daraasado waqti-buuxa ah (ugu yaraan 9 dhibco) semester kasta.
Codsadayaashu waa inay haystaan ​​ugu yaraan GPA ee 3.3 inta lagu jiro barnaamijka qalin -jabinta.
5. Abaalmarinta Fredonia Promise
Abaalmarinta Fredonia Promise waxaa heli kara ardayda sannadka koowaad ee Jaamacadda Gobolka New York ee Fredonia. Iyada oo loo marayo abaalmarinta maaliyadeed, jaamacaddu waxay ujeeddadeedu tahay inay taageerto waxbarashada ardayda aan haysan maalgelinta waxbarashadooda.
Qiimaha deeqda waxbarasho wuxuu u dhexeeyaa $ 1,500 illaa $ 2,000 waana la cusboonaysiin karaa. Intaa waxaa dheer, abaalmarinta maaliyadeed waxaa si gaar ah loogu talagalay ardayda jecel inay ku noolaadaan xerada.
Musharrixiinta waa inay lahaadaan celcelis ahaan dugsiga sare oo aan miisaan lahayn 85 iyo mid ka mid ah kuwan soo socda; 1080 SAT cusub (EBRW + Xisaab ka dib Maarso 2016), ama 1000 Old SAT (Akhriska Halis ah + Xisaabta), ama 22 Dhibcood Isku -darka ACT.
Codsadayaashu waa inay haystaan ​​ugu yaraan GPA ee 2.5 si ay u haystaan ​​deeqda -waxbarasho oo ay ugu noolaadaan gudaha hoolka jaamacadda.
Abaalmarinta maaliyadeed waxay dabooli doontaa kharashaadka la xiriira "wax-barasho la'aanta" oo ay ku jiraan hoyga, buugaagta, safarada, shaqsiga, iwm. Waa mid ka mid ah deeqaha waxbarasho ee ugu sarreeya New York ee ardayda caalamiga ah.
6. Deeqda Barnaamijka Sharaf
Deeqda Barnaamijka Sharafta ayaa diyaar u ah ardayda aadka u wanaagsan ee lagu casuumay inay ku biiraan barnaamijka sharafta dayrta sannadka koowaad ee Kulliyadda St. John Fisher. Damaanad -qaadayaasha deeqdan waxbarasho waxaa ka mid ah ardaydii hore, macallimiinta, aasaaska, iwm.
Ardayda raba inay ku guuleystaan ​​abaalmarinta waa inay qoraan maqaal. Qaatayaasha abaalmarinta waxaa lagu go'aamin doonaa iyada oo dib loo eegayo qoraalka Agaasimaha Barnaamijka. Qiimaha deeqdan waxbarasho waa $ 1,500 waxayna dabooli doontaa kharashyada aan waxbarashada ahayn afar semester ($ 375 semesterkiiba).
Codsadayaashu waa inay lahaadaan celcelis ahaan HS 92 ama ka fiican iyo 1150 ama dhibco isku dhafan oo SAT oo wanaagsan ama 25 ama dhibco ACT ka fiican.
Murashaxiinta ardayda beddelayaa waa inay lahaadaan 3.3 isugeynta GPA ama ka fiican iyo ugu yaraan 15 dhibco la wareejin karo.
7. Abaalmarinta Aqoonyahanka Dean
Sannad kasta, Jaamacadda Gobolka ee New York ee Fredonia waxay siisaa Abaalmarinta Aqoonyahan Dean ardayda cusub ee raba inay ku noolaadaan kambaska machadka.
Abaalmarinta Aqoonyahanka Dean waa mid ka mid ah deeqaha waxbarasho ee ugu wanaagsan New York ee ardayda caalamiga ah. Waa la cusboonaysiin karaa qiimihiisuna waa $ 2,000.
Musharrixiintu waa inay lahaadaan celcelis dugsi sare oo aan miisaan lahayn 90 iyo mid ka mid ah kuwan soo socda: 1080 SAT cusub (EBRW + Xisaab wixii ka dambeeya Maarso 2016), ama 1000 Old SAT (Akhriska Xasaasiga ah + Xisaabta), ama 22 ACT Composite score.
Marka la qoro machadka, qaatayaashu waa inay lahaadaan ugu yaraan GPA ee 2.8 si ay u sii haystaan ​​deeqda waxbarasho.
8. Abaalmarinta Madaxweynaha ee Heerka Sare
Abaalmarinta Madaxweynaha ee Heerka Sare waa abaalmarin ku saleysan mudnaan oo la siiyo ardayda cusub ee aadka u wanaagsan ee Jaamacadda Gobolka New York ee Fredonia. Intaa waxaa sii dheer, kuwani waa arday diyaar u ah inay ku noolaadaan hoolka jaamacadda ama guriga magaalada.
Abaalmarinta maaliyadeed waa la cusboonaysiin karaa waxaana lagu qiimeeyaa $ 5,000. Waa mid ka mid ah deeqaha waxbarasho ee ugu sarreeya New York ee ardayda caalamiga ah. Deeqdan waxbarasho ayaa daboolaysa khidmadaha aan waxbarashada ahayn oo ay ku jiraan hoyga, buugaagta, safarada, iwm.
Codsadayaashu waa inay lahaadaan 95 celcelis dugsi sare oo aan miisaan lahayn.
Marka la qoro, qaatayaashu waa inay haystaan ​​ugu yaraan GPA -ga 2.8 si ay u sii haystaan ​​deeqda -waxbarasho oo ay ugu noolaadaan hoolka jaamacadda ama guryaha magaalada.
9. Ilaaliyaha Deeqda Riyada
Sannad kasta, qaybinta Diiwaangelinta iyo Adeegyada Ardayga (ESS) ee Jaamacadda Gobolka New York ee Fredonia waxay siisaa Hayso Deeqda Riyo (KOD) afar arday oo cusub si ay shahaadooyinkooda uga sii wataan machadka.
Ardaydan waxaa la guddoonsiiyaa abaalmarintan iyada oo ku saleysan guusha dugsiga sare, adeegga bulshada, iyo ballanqaad la muujiyey ee dhaqammada kala duwan.
Qiimaha deeqda waxbarasho waa $ 4,000 waana la cusboonaysiin karaa ilaa afar (4) sano haddii ardaygu ilaaliyo heerarka waxbarasho ee loo baahan yahay iyo shuruudaha guryaha. Qaatayaashu waa inay gaaraan ugu yaraan 3.00 GPA si ay u sii haystaan ​​deeqda waxbarasho.
Musharrixiinta waa inay lahaadaan mid ka mid ah shuruudaha soo socda: 10 % ugu sarreeya fasalkooda qalin -jabinta, buundooyinka SAT ugu yaraan 1100 (ama 25 ACT), ama ugu yaraan 85 boqolkiiba celceliska dugsiga sare.
Codsadayaashu waa inay haystaan ​​diiwaan xooggan oo ah adeegga bulshada iyo hoggaaminta.
Murashaxiintu waa inay qoraan maqaal ku saabsan riyada Dr. Martin Luther King Jr ee sinnaanta oo ay ku jirto sida ay uga go'an tahay inay raacaan riyadaas.
Codsadayaashu waa inay ilaaliyaan diiwaangelinta waqtiga-buuxa ee jaamacadda oo ay ku nool yihiin hoolalka deggenaanshaha.
10. Barnaamijka Aqoonyahannada Caalamiga ah ee Hauser
Barnaamijka Aqoonyahannada Caalamiga ah ee Hauser waa sharafta ugu mudan ee la siiyo ardayda heerka sare ah ee raadinaya shahaadada sharciga. Illaa toban (10) arday ayaa sannad walba hela abaalmarinta.
Waxaa lagu bixiyaa mudnaan waxayna muujineysaa baaxadda, kala duwanaanta, iyo kasbashada xubnaha ardayda ka qalin jabisay Dugsiga Sharciga ee NYU.
Guuleystayaasha waxaa lagu xushay awooddooda aqooneed iyo hoggaamineed iyo sidoo kale awoodda ay u leeyihiin inay si wax -ku -ool ah uga dhex muuqdaan bulshada caalamka ee aqoonyahannada iyo dhakhaatiirta. Codsadayaashu waa inay noqdaan kuwa ka qalin jabiyay dugsiga sharciga oo ka yimid meel ka baxsan Mareykanka
Deeqdani waxay daboolaysaa waxbarasho buuxda, gunno, buugaag, hoy, iwm.
Top 6 NYU Deeqaha Ardayda Caalamiga ah
13 Dugsiga Kitaabka Quduuska ah Deeqaha Buuxa ee Ardayda Caalamiga ah
6 Deeqda waxbarasho ee ugu Fiican ee Ardayda Caalamiga ah ee Kanada
15 Deeq waxbarasho oo dhamaystiran oo loogu talagalay Ardayda Caalamiga ah ee Yurub
10 Deeqaha Shahaadada Jaamacadeed ee ugu Fiican Ardayda Caalamiga ah ee Kanada
Dibedda Ku Baro Iyada oo Deeq waxbarasho la siinayo Shahaadooyinka Maraykanka
Previous Post:10 Akadeemiyada Kubadda Cagta ee ugu Fiican Nigeria
Post Next:NNPC-Chevron Deeq waxbarasho oo heer jaamacadeed ah oo loogu talagalay Nigeria | Sida loo codsado oo loo guuleysto